Trump oo wacad ku marey inuu xoojin doono dadaalkiisa in muhaajiriin aysan soo geli doonin America – XOGMAAL.COM
Trump oo wacad ku marey inuu xoojin doono dadaalkiisa in muhaajiriin aysan soo geli doonin America
By MN USA	 On Nov 2, 2018
Madaxweyne Trump ayaa boqolaal qof oo uu la hadlay u sheegey in haddii ay doonayaa in dalka aysan soo galin muhaajiriin in ay tahay in ay doortaan musharraxiinta matalaya xisbiga Jamhuuriya oo uu isagu ka tiran yahay.
Trump ayaa isticmaalaya erayo muujinaya in uu si weyn uga soo horjeedo dadka soogalootiga ah ee doonaya in ay dalka Mareykanka soo galaan, wuxuuna in badan ku celceliyey erayo ah ku weerarro dadka u ololeeya in dadkaasi la soo daweeyo.
Trump ayaa labadii maalmood ee ugu dambeeyey goobo ay dadka taageersan xisbiga Jamhuuriga ka sheegay hadalo ka turjumaya sida uusan u rabi in dadka ay soo galaan muhaajiriintu, wuxuuna amar ku bixiyey in 1500 askari oo geeyo xuduudku uu Mareykanka la wadaago Mexico, intaasoo sheegay in uu ciidamo dheeraad ahna uu halkaasi dhawaan la geyn doono.
Dad badan ayaa walaac ka muujiyey hadallada madaxweyne Trump ee lid ku ah dadka soogalootiga ah, taasoo ay sheegeen in ay dhalin karto in neceb weyn dadkaasi loo qaado.
Soomaalida Mareykanka ku nool ayaa ka mid ah dadka ay hadallada madaxweyne Trump uu walaac ku abuurey maadaama ay qoyskooda qaar ka mid ah weli ay yihiin kuwo rajo ka qabo in ay Mareykanka keenaan.
Shan carruur ah oo ku dhimatey shilal ka dhacday gudaha Mareykanka
Waraysi: Wararkii ugu dambeeyay ee Doorashada Maraykanka iyo Guusha Ilhaan Cumar ay ka filayso (dhegayso)